Izixhobo kunye namaZiko okuPhilisa eMveli aseMelika
Amasiko aseMelika yokuPhilisa
Izixhobo kunye neMisebenzi yokuPhulukisa
Iinkqubo ezininzi zokuphulukisa kunye nemikhosi yokomoya eyenziwa namhlanje ngokuphulukisa abasebenzi kunye namaqela anesiphymikethi amkelwe kwizithethe ezivela kwizizwe ezahlukahlukeneyo zaseMerika.
Imbali ibonisa ukuba isizwe ngasinye siya kuba nomdala omnye okanye ngaphezulu abaye bahlambulula ubugcisa bokuphilisa. Laba bantu babeza kuba ngabaqwengqeleli, abaphili, kunye nabaqhagamshelana nomoya. Imisebenzi kunye neendidi zokuphulukisa ezobugcisa kunye nemikhosi yokomoya eyenziwa ngokuqhelekileyo iyahluka ukusuka kwisizwe ukuya kwisizwe.
Ubugcisa bokuphulukiswa kwamasiko aseMerika kunye nezenzo zisekelwe emhlabeni, zihlonipha kwaye zihlonipha uYise, uMama uMhlaba, uTatomkhulu uLanga kunye noTogo.
Izikhokeli zeZizwe azichasani ngee-workshops ze-Shamanism
Iinkokeli zemihla yanamhlanje zidla ngokugqithisa ngokwemiqathango enjengeShamanism, Shaman, kunye ne- Medicine Man isetyenziswe ngokukhululekile njengendlela yokukhanga abafundi ukuba bafunde imveli yaseMelika. Ukungavumelekanga kuyafaneleka ukuba iisemina kunye neendibano zokusebenzela ezithengiswa njenge-"Shamanism yaseMveli" azizona iimfundiso zendabuko kuphela, kodwa zihlanganiswe iziqulatho zezifundo ezibandakanya izibhengezo zemikhosi yaseMelika yaseMelika kunye ne-Wiccan, i-New Age ngokomoya kunye neMachiza aseMpuma.
Amanqaku aseMerika kunye namasiko
Imimoya yezilwanyana okanye i-Totems - Iintlanzi zezilwanyana: Ukubonakala kweentaka kunye nezilwanyana, nokuba yinyani okanye ngexesha lokuphupha, kuthathwa njengabathunywa be-totem banikela ngcebiso.
I-Sweat Lodges - I- sweatshi yaseMelika yaseMelika okanye isithethe sokuhlanjululwa kunye nokuphilisa umzimba, ingqondo kunye nomoya. I-My first experience sweing experience yaba iGaia, ihlonipha umama womhlaba, kunye nabathathi-nxaxheba oomama kunye nogogo.
I-Dreamcatchers - Abalingisi bokuqala bamaphupha (iingodo eziyingcwele) zaziqulunqwe kubantwana njengokuba baphulukisa izibilini zokuzikhusela kwiindawo zokuhamba.
Iimfuyo - Izinto ezingcwele ezinjengeentsiba, amathambo, ama-seashell, izikhumba zezilwanyana, njl njl. Zisetyenziswa njengezixhobo zokuququzelela ukuvuswa kwinto yakho yonke, esetyenziswe emthandazweni, okanye kusetyenziswe ukukhuselwa nokuphulukiswa. Jonga Iintsiba
Umthandazo Iiflegi - Ukuthandaza okanye ukuthandaza iimflegi ezenziwe kwintsimbi kunye nocuba kunikwa uMoya Omkhulu ngokutshintshisa iintsikelelo.
Ukugubha - Ukusebenzisa ukutshaya i- wand smudge wand yokuhlanjululwa yinxalenye yamasiko amaninzi aseMerika. Iimvumba eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukubetha ziquka i-sage, sweetgrass , i-yerba kunye ne-lavender.
Iibhobho zoxolo zoMkhosi - Umbhobho waseMelika waseMelika utshaywa kwimikhosi okanye isiko lokubiza iizinto ezine kwaye unike umnikelo kuMoya Omkhulu.
I-Curanderismo - Ukukhupha kunye nokuziqhelanisa kwamanqanaba okuphulukisa aseNative naseSpanishi afaka imifuno, i-sweats, ukutya, kunye ne-magick.
Ingqungquthela Engcwele / I-Wheel Wheel - Ulwalathiso ngalunye lweevili zonyango lunika izifundo zalo, ubudlelwane bombala kunye nesiluleko somoya.
Ukubamba Intetho - Ukuhambisa iintonga ezithethayo kwisithethi kwisithethi yindlela efanelekileyo yokuthetha kunye nokwabelana ngeengcamango. Esi siko sinceda ngakumbi ekugcineni ukungavumelani okuphuma ekuphumeni.
Amaphulo okuPhulukisa - i-Amulets okanye i-Intelligence ehambelana neMveli yaseMelika iquka iigobols, i-crystals kunye neempawu zamatye, iintambo, iintsiba, ulusu lwezilwanyana kunye namathambo, kunye ne-Zuni.
Isifundo malunga nokuqonda ukuxhamla
Imbali okanye iFable of the Praying Hands Artpiece
Ukucamngca kunye neZiko
I-TMS, i-Mindbody, kunye neMpilo Yethu Yenyama
Iikhompyutha zeNyukliya ze-US zisasebenzisa i-Floppy Disks
Abafazi beeNkwenkwezi ze-16: I-Renaissance kunye neBaroque
I-Paddle Float Tutorial - Indlela Yokuzihlangula Ngokusebenzisa iPaddle Float
Iintlanganiso zeSpookiest Shadow Abantu
Ukuthengisa amaMashini Unokufa ngakumbi kunokuba uSharks
I-Carleton College Admissions
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngeeNcwadi N no-O
Uthabatha inxaxheba kwiSpanish
Iwayini kunye neMvelaphi yalo
Ukuphilisa umntwana ngaphakathi
Top 10 Alanis Morissette Iingoma ezipheleleyo
I-French Vs Academic Vs yesiFrentshi I-Modern Spoken Street yaseFransi
Ukudibanisa kwe 'Creer'
Ii-Butterflies kunye neMoths, i-Orpid Lepidoptera
Ngubani owafaka umshini we-Snowmaking?
Indlela yokwenza itampu yangempela yeLava
Iintlobo ezili-10 ze-Architecture zoTshintsho lweKhaya
Iintsingiselo kunye nokusetyenziswa kwegama lesiFrentshi Le five to seven
Amagama aqhelekileyo adidekile: Aqondayo kwaye adibeneyo
Funda ngeAgents of Erosion